Wararka Maanta: Arbaco, May 20, 2020-Fatahaada Beledweyne oo saameeyn ku yeelatay u diyaar garowga Ciidul-fitriga
Maalmaha ciidul-fitriga oo ka mid ah maalmo aay muslimiintu aad u faraxsanyihiin ayaa shacabka Beledweyne waxaay ku suganyihiin xaalad aad u adag maadaama aay ku dhibaateeysan yihiin daafaha magaalada oo aay u barakaceen.
Suuqyada ayaa xirmay, waxaa burburay inta badan guryihii aay dadku daganaayeen, waxaana magaaaladu aay wehel u tahay biyaha wabiga oo kusoo rogmaday.
Goobo ganacsi oo aad u kooban islamarkaana lagu iibiyo dharka raga iyo dumarka ayaa ka furan gudaha magaalada, waxaana la sheekeeysanay qaar kamid ah ganacsatada. “Ganacsi fiican kama jiro halkaan waxaan maalintii oo dhan noo yimaada dad yar, dadkii oo dhan waay barakaceen”. Sidaas waxaa yiri Cabdisalaan Cumar oo kamid ah ganacsatada dharka Beledweyne.
Marka laga yimaado ganacsiga, dadka barakacay ayaa wajahaya xaalad aad u adag oo dhinaca nolosha ah, waxaana aay inoo xaqiijiyeen inaaysan weli haaysan hooy, biyo nadiif ah iyo musqulo, mana jirto cid ilaa hada gargaar rasmi ah gaarsiisay shacabka ka barakacay fatahaada Beledweyne.